Amathiphu wokwenza umquba ekhaya - Isikhungo se-EcoTechnology
Amathiphu Wokwenza Umquba Ekhaya
Ukwenza umquba inqubo yokusebenzisa kabusha imvuthuluka yokudla kwakho okusele nodoti waseyadini ukukhiqiza umanyolo. Kuyindlela enhle yokuthuthukisa impilo yegceke lakho emuva nokunciphisa inani lemfucumfucu ephilayo eya endaweni yokulahla udoti noma indawo yokulahla amandla.
Njengamanje, ama-50% kadoti oya endaweni yokulahla inkunkuma, okubandakanya amakhilogremu angama-60 wokudla okusaphazwa minyaka yonke. Lapho imvuthuluka yokudla ilahlwa kudoti iphelela endaweni yokulahla udoti lapho ichitheka ngokungafanele, ithathe indawo enkulu futhi ikhiphe amagesi abamba ukushisa, afaka isandla ekuguqukeni kwesimo sezulu. Lapho lezi zinto zenziwa umquba esikhundleni salokho, ziphinda zisetshenziswe ekuchitshiyelweni kwenhlabathi okunothile ngezakhamzimba ezibalulekile ezingasiza inhlabathi nezitshalo.
Umquba uphendula imfucuza ibe “yigolide elimnyama.” Umquba umquba ocebile onomsoco osekubolile lapho kukhona umoya-mpilo (ukugayeka kwe-aerobic). Le nqubo yokubola ibizwa ngokuthi ukwenziwa komquba, ukuqala inqubo yamabhayisikili wokuzivuselela futhi ekugcineni kuzuze wonke umjikelezo wezakhi. Ekhaya, ungasebenzisa umquba ngotshani bakho, ingadi, noma izitshalo zasendlini.
Ziyini izinzuzo zokwenza umquba?
Kwandisa izinto eziphilayo emhlabathini futhi kusiza ukwakha isakhiwo sezimpande ezizwakalayo.
Ilinganisela i-pH yenhlabathi.
Kwenza izakhi zomhlabathi zitholakale kalula ezitshalweni.
Iphambukisa imfucumfucu yokudla ezindaweni okulahlwa kuzo udoti.
Idonsa izikelemu zomhlaba, ezibhekwa “njengezinto ezisetshenziswa kabusha kakhulu emhlabeni.”
Kwenza inhlabathi yobumba ibe nomoya ukuze ikwazi ukukhipha kangcono.
Kuthuthukisa ikhono lomhlabathi oyisanti ukubamba umswakama futhi umelane nokuguguleka.
Kukhulisa uvithamini namaminerali wokudla okutshalwe engadini ecebile ngomquba.
Yehlisa ukuthembela kumanyolo ophethiloli.
Yini engidinga umquba?
Ukwenza umquba kulula ukukwenza ekhaya, futhi kunganciphisa izindleko zakho zokulahla futhi kuzuze izingadi zakho zasekhaya. Ukwenza umquba okunempilo kudinga ukuthi lezi zinto ezine zisebenze ndawonye:
Ukushisa: Amagciwane asenqwabeni yomquba enza ukushisa njengoba kusebenza futhi kukhula. Izinga lokushisa elingcono kakhulu lokufaka umquba ngokushesha cishe lingama-140 ° F enkabeni yenqwaba. Ukugcina amazinga okushisa amahle, inqwaba yomquba kufanele okungenani ibe ngu-3'x3'x3 ′. Ungaqala inqwaba encane futhi wakhe njengoba uhamba.
Oxygen: Izinto eziphilayo ze-Aerobic, "ezithanda umoya-mpilo" zisebenza ngokushesha futhi ngaphandle kwephunga. Uma inqwaba yomquba ingenawo umoya owanele, izinto eziphilayo ezingama-anaerobic zizothatha izintambo bese kuqubuka iphunga. Khuthaza ukubola kwe-aerobic ngokuguqula inqwaba noma nini lapho ufaka izinto zokwakha. Hlanganisa emaqabungeni omile noma utshani ukuze unganciphisi ukwehla noma ukucindezela.
Umswakama: Zonke izinto eziphilayo, kufaka phakathi lezo ezisenqwabeni yomquba, zidinga amanzi ukuze zikhule. Inqwaba yomquba eyomile izobola kancane. Uma imanzi kakhulu, umoya-mpilo uzokhawulwa, futhi ukubola kwe-anaerobic kungenzeka. Ungadinga ukufaka amanzi noma izinto ezomile ngemuva kwezulu elomile noma elimanzi. Yenza i- “Squeeze Test” - izinto zokwenziwa komquba kufanele zibe mswakama njengesipanji esikhishwe ngaphandle.
Ukudla / Izinto zokwakha: Izidalwa ezenza umsebenzi wokubola zibheka imfucuza yethu njengokudla kwayo. Izinto eziphilayo ezincane kakhulu zidinga inhlanganisela yekhabhoni ne-nitrogen ukuze ikhule futhi izalane. Ngokuvamile, izinto "eziluhlaza" noma ezimanzi zine-nitrogen ephezulu (ibola ngokushesha), kuyilapho "nsundu", izinto ezomile noma ezinokhuni ziphezulu kwikhabhoni (yehla kancane). Lungisa izinto ngaphambi kokuzifaka enqwabeni ngokusika izingongolo, imivini, amahlumela amakhulu, utshani noma utshani, cabanga ukusebenzisa umshini wokugunda utshani phezu kwamaqabunga ukunciphisa usayizi wawo futhi njalo ususe udoti kunoma iyiphi imfucuza yasegcekeni.
Hlobo luni lwezinto zokwakha engingazifaka ekhayeni lami?
Inqwaba yomquba ekahle izoba no-3: 1 Balance of Carbon (browns) to Nitrogen (greens).
Izinto ezicebile ngeCarbon zifaka: amaqabunga omile, imicu, hay, iphepha eligayiwe, amakhadibhodi, iphephandaba, ibhulashi, sawdust, izinaliti zikaphayini.
Izinto ezicebile nge-nitrogen zifaka: imvuthuluka yokudla, ukusikwa kotshani, ukhula, amagobolondo amaqanda, izinkundla zekhofi kanye nezihlungi, izikhwama zetiye, umquba.
Ungafaki ubisi, inyama, amafutha, amathambo, uwoyela, imfucuza yezilwane zasolwandle, noma izinsalela zokudla kwasolwandle kumquba wakho wasekhaya. Lezi zinto zingadala iphunga elibi futhi zihehe izinambuzane kumquba wakho. Futhi, “amapulasitiki” awakwazi ukwengezwa emqubeni wakho wasekhaya futhi kufanele athunyelwe esikhungweni somquba wezimboni noma kudoti.
Izinaliti zikaphayini unokuqukethwe okune-asidi ephezulu futhi kuhle ukukusebenzisa njenge-mulch ezitshalweni ezithanda i-asidi njengama-strawberry noma ama-rhododendrons. Izinaliti zikaphayini zithatha isikhathi eside ukwenza umquba ngokuphelele. Akudluli ku-10% wenqwaba okufanele kube izinaliti zikaphayini ngasikhathi sinye.
Umlotha wezinkuni kufanele isetshenziswe ngokuqapha; banezinga eliphakeme le-alkaline. Kodwa-ke, zinikeza i-potash, umsoco obalulekile engadini yakho. Faka umlotha enqwabeni yakho yomquba ngamanani amancane - angabi ngaphezu kwekota ye-intshi ngasikhathi.
Ukuqothulwa kotshani kufanele uhlale otshanini bakho ukuze uyigcine iphilile. Uma uqoqa izicucu zotshani kanye nomquba, uzihlanganise kahle nezinto ezinkulu "ezinsundu" ukuzigcina zingaminyene futhi zinuke.
Uhlobo luni lomgqomo engiwudinga ukufaka umquba?
Ungathenga eyodwa noma uzenzele eyakho. Imiphakathi eminingi yaseMassachusetts ithengisela abahlali imigqomo yomquba exhaswayo, ngakho-ke hlola idolobha / idolobha lakho uma linakho lokhu. Ngaphandle kwalokho, ungazithenga esitolo sehadiwe noma ku-inthanethi. Ungakha futhi umgqomo wakho kusuka ezintweni ezahlukahlukene ezisukela kuma-pallets enkuni, imigqomo kadoti, noma uthango locingo.
Kuthiwani uma ngiqasha / ngingenayo indawo engaphandle yomquba wami?
I-Vermicomposting iyindlela enhle yokwenza umquba wasendlini, noma ukwenza umquba wakho uphule ngokushesha. Usebenzisa izimpethu ezibomvu ongazithenga ku-inthanethi, futhi ufaka umgqomo wakho womquba ngephepha elishisiwe noma elimanzi, izibungu zakho zingachuma ngaphakathi komgqomo womquba. Yigcine ipholile futhi imanzi lapho izikelemu zinempilo. Kuthatha cishe amasonto ayi-12 ukuthi umquba uqedwe. Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi nge-vermicomposting.
Ngazi kanjani ukuthi umquba usuphelile?
Umquba ophelile ungumbala onsundu, oqhekekile, onuka umhlaba, ofana nenhlabathi. Kuthatha phakathi kwezinyanga eziyisithupha nonyaka owodwa ukuthi inqwaba ikhiqize umkhiqizo ophelile, kuya ngokuthi kunakwa kangakanani. Akufanele ukwazi ukubona imfucuza engenile enqwabeni. Ukuze isetshenziswe kahle, ungayihlola ngaphambi kokuyisebenzisela umquba ocolekile bese ubeka izinto ezingabhaliwe kahle enqwabeni ukuze ziqhubeke ziqhubeke.
Yini engingayenza ngomquba ophelile?
Yisebenze ngqo enhlabathini yensimu (ithuthukisa ukwakheka, ingeza izakhamzimba).
Fafaza otshanini ukuze ugcine uluhlaza ngaphandle kwamanzi amaningi.
Yigcobise eduze kwezihlahla ukondla izimpande nokunciphisa izidingo zamanzi.
Yisebenzise ngqo engadini izikhathi ezimbalwa ngonyaka njenge-mulch.
Hlanganisa nokufaka inhlabathi ngezidingo zengadi yangaphakathi.
Uma ungenayo ingadi, nikela ngayo esikoleni noma engadini yomphakathi.
Ngingakwazi ukufaka umquba ebusika?
Yize le nqubo izokwehla esimweni sezulu esibandayo, eminye imisebenzi yamagciwane izoqhubeka. Imfucumfucu yokudla isengangezwa inqobo nje uma imbozwa njalo ngamaqabunga noma ngotshani. Ungaqhubeka nokufaka inqwaba yakho ngokuyimboza ngopulasitiki ojiyile, omnyama.
Yini okufanele ngiyenze ngamaqabunga angahambelani emgqonyeni wami?
Ukwehlisa umthamo wamaqabunga, sebenzisa umshini wokugunda utshani phezu kwawo ngaphambi kokuwafaka enqwabeni, noma uwamanzise bese umboza ngoseyili ukuze angavuthuzi. Bangeze emgqonyeni wakho womquba unyaka wonke ukumboza imfucuza yokudla noma ukuhlinzeka ngezinto "ezinsundu" zeresiphi yakho yokwenza umquba. Imfucumfucu yamacembe kanye negceke (hhayi udoti wokudla) ingafakwa umquba kalula enqwabeni ngaphandle kokusebenzisa ibhini.
By U-Emily Susan Gaylord|2019-06-12T07:37:53-04:00Kwangathi i-30th, i-2019|Ukuqukwa komquba|
Novemba 23rd, 2020 | 0 Amazwana